गभर्नरलाई चास्नी चटाएपछि कसैले केही नाप्दैन भन्ने ढुङ्गानालाई कारवाही गर्ला त अख्तियारले ?
भुपेन्द्र आचार्य, काठमाडौं, २७ साउन । गभर्नरलाई चास्नी चटाएपछि कसैले केही नाप्दैन भन्ने नेपाल बंगलादेश वैंकका कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सफ्टवेयर र जग्गा खरिदमा समेत करोडौं कुम्ल्याएको समाचार छ ।
शेयर दलालीसँग मिलेर ८० प्रतिशत राइट शेयर जारी गर्दा ८ लाख शेयर फर्जी रुपमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका यी कार्यकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही नगरेपछि प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
अख्तियारले कारवाही गर्ला त ? स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनबी बैंकको जग्गा खरिद सफ्टवेयर परिवर्तन तयारीका सम्पूर्ण फाइल राष्ट्र बैंक मार्फत मागेको छ । अख्तियारमा परेको २१५३३ नंम्बरको उजुरीको छानबिन क्रममा फाइल झिकाउने निर्णय भएको र यसमा राष्ट्र बैंकसमेत कारवाहीमा पर्ने देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यहीकारण कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगाना यतिखेर देउवापत्नी आरजु र प्रचण्डका निकट व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा पुगेको बताइन्छ । बैंकहरुमा चर्चा चलेअनुसार देउवाका साला भूषणले ज्ञानेन्द्रलाई नआत्तिनु भनेका छन् । ढुंगानालाई कमलादीको जग्गा खरिद र बैंकको सफ्टवेयर खरिदमा खान त खानेभए तर जेजति खाइसकेका छन्, त्यसैमा ढुंगा लागेको बताइदै छ ।
अब कुनै पनि हालतमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भ्रष्टाचारबाट उम्किन नसक्ने भनिरहेका बेलामा संसदको समितिले साझा प्रकाशनको भ्रष्टाचार र आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा छानबिन हुनथालेको र यसमा कुनै कारवाही नहुने राजनीतिक माहोल बनिसकेको बताउनेहरु भन्छन्– ढुंगाना त्यही लटका कारण कारवाहीबाट बच्न सक्छन् ।
यी ढुंगानामाथिको अर्को गम्भीर अ ारोप भनेको अष्ट्रेलियाको ग्रीनकार्ड हो । यिनीसँग ग्रीनकार्ड छ कि छैन भनेर अख्तियारले खरी घस्ने हो भने यिनको कार्यकारी पदमात्र जाने होइन कि यिनको नेपालमा भविष्यसमेत समाप्त हुनेछ ।
एडभान्स लिइसकेको सफ्टवेयर खरिदको पैसा ब्रिफकेसमा हालेर ढुंगाना डुबतेका तिनकेका सहारा खोज्दै हिड्दा भूषण उनका लागि भाग्यबिधाता बनेर अगाडि आएको चर्चा पनि छ ।
ढुंगाना अख्तियार प्रमुखका प्रिय मित्र पनि हुन् । यही मित्रताको लाभ उठाएर ढुंगानाले कमिशन खाइरहेका छन् । अख्तियारमा जति उजुरी परे पनि दीप बस्नेतले लुकाइदिने गरेका छन् । तर यतिबेला दीप बस्नेत नै निलम्बनमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । उनीमाथि महाभियोगको खतरा पनि छ । दीप जसरी पनि उम्कने सूत्र खोजिरहेका कारणले ढुंगानाको छटपटी अरु बढेको हो । यिनको दौडधूप नेताहरुकोमा बढेको देखिन्छ ।
बैंकका लागि खरिद गरेको सवा करोडको गाडी यिनले आफ्नै नाममा पास गराएका छन् । सवा करोडको गाडी चढ्ने यिनको हैसियत र आर्थिक अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले किन चासो नदिएको हो ? त्यता पनि यी ढुंगानाविरुद्ध दश उजुरी परेको बताइन्छ ।
सतर्कता केन्द्रमा समेत बंगलादेश बैंकको फाइल उठेको छ ।
नेपाल बंगलादेश वैंकका कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगाना त उदाहरणमात्र हुन्, यस्ता कार्यकारीहरु अनेक वैंकहरुमा कार्यरत छन् । अधिकांश कार्यकारीहरु कि त सुन्दरीको मामिलामा, कि त कमिशन र अनियमितताका मामिलामा डामिएका भेटिन्छन् राजतिलक साप्ताहिकमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको रामरमिते चालामालाका कारण बैंकहरुमा भित्री समस्या थपिदै गएका छन्, कुनै दिन नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै भूइँचालो जानसक्ने बताइन्छ ।